CAD for Myanmar: November 2011
ကျနော် ရှေ့မှာ Basic Drawing Commands, Display Control, Selection Methods, Object Snaps တွေ ပြောထားပြီးပါပြီ။ ဒီတော့ Modify လုပ်တဲ့ Commands တွေ “စ” ပြောတော့မယ်။ ပြီးရင် Exercises တွေ ပေးမယ်။ လွယ်တာတွေ ကျနော်နဲ့ အတူတူဆွဲပြီး ခက်တာတွေ ခင်ဗျားတို့ဖာသာ ဆွဲဖို့ ချန်ထားခဲ့မယ်။ မကောင်းဘူးလား။ တချို့က ကိုယ့်ဖာသာစဉ်းစားပြီး ဆွဲရတာကို သဘောကျမှာပါ။ သူချည်းပြောနေတာပဲ ကိုယ့်ဖာသာတောင် မစဉ်းစားရဘူးဆိုပြီး ဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါဗျာ . . . နော်။
အလကားပြောတာပါဗျာ။ ပထမ Exercises တွေထားခဲ့မယ်။ ဆွဲဖို့အချိန်တခု ပေးထားခဲ့မယ်။ နောက်တော့ ခက်မယ်ထင်တာကို ကျနော်နဲ့အတူတူ ဆွဲကြတာပေါ့။ နောက်တော့အတူတူ ဆွဲကြမှာပဲဆိုပြီး ထိုင်စောင့်နေတာတော့ မလုပ်နဲ့လေ။ အဓိက ကခင်ဗျားတို့ ဘယ်လောက်ထိ အသုံးချနိုင်သလဲ ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန်းစစ်နိုင်ဖို့ပါဗျာ . . . ။
ပထမဆုံး “စ”ဖျက်ကြည့်ရအောင်။ ဖျက်ပါတယ်ဆိုမှတော့ လွယ်မှလွယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျနော် အရင်ပေးထားတဲ့ Selection 2004.dwg File ကိုမရသေးရင် Download အရင်ချလိုက်ပါ။ ပြီးတော့ ဖွင့်ပြီး စမ်းဖျက်ကြည့်ကြတာပေါ့။
Command Line: E (or) ERASE <Enter>
2D-09: Fig-01 - Menu Bar: Modify> Erase
2D-09: Fig-02 - Toolbar: Modify Toolbar > Erase button
2D-09: Fig-03 - Ribbon: Home Tab> Modify Panel > Erase
Command: ERASE <Enter>
Modify လုပ်ဖို့ ဘယ် Command ကိုပဲသုံးသုံး Select objects: လို့ အမြဲတောင်းမှာပါ။ ဒါကြောင့် ကျနော် "2D-06: သိထားသင့်သော Selection Methods" များမှာ ကြိုရှင်းပြခဲ့တာပါ။ အဲဒီ Methods တွေကို Select objects: လို့တွေ့တိုင်း အကုန်သုံးလို့ ရပါတယ်။ အရေးကြီးတာက ကိုယ်အလိုရှိသလို Select လုပ်နိုင်ဖို့ပါ။ Selected object(s) တွေကို Highlight နဲ့ပြပါလိမ့်မယ်။ သေချာပြီဆိုရင် Enter ခေါက်ပြီး ဖျက်နိုင်ပါတယ်။
အရေးကြီးတာလေးတခု သတိပေးချင်ပါတယ်။ Erase, ALL ကိုသုံးရင် သတိထားပါ။ Select, ALL ဟာ Frozen Layer ထဲက Object(s)တွေကို ဆင်းမကောက်ပေမယ့် Off Layer ထဲက Object(s) တွေကို ဆင်းကောက်ပါတယ်။ Frozen ရော Off ရောက မမြင်ရတာခြင်းတူပေမယ့် အဲဒီလို ကွာခြားပါတယ်။
Layer(s) တွေကို Off လုပ်၊ ပြီးတော့ မလိုတာတွေဆိုပြီး ခပ်လွယ်လွယ် ALL နဲ့ရွေးပြီး ကြိတ်ထည့်လိုက်။ ပြီးတော့ Overwrite လုပ်ပြီး Same Name နဲ့သိမ်း။ နောက်ပြန်ဖွင့်တော့ Layer(s) တွေအကုန်ပြန် ON လည်း ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ ဘေးဘီလှည့်ကြည့်။ ဟိုလူ့စွတ်စွဲ၊ ဒီလူ့စွတ်စွဲနဲ့ ဥစ္စာပျောက်ငရဲရောက် ဖြစ်ကုန်ရော။ တကယ့်လက်တွေ့မှာကို မြင်ဖူးခဲ့လို့ သတိပေးရတာပါ။ ကျနော် Layer အကြောင်းကျရင် ထပ်ရှင်းပါ့မယ်။ အဲ . . . ပြီးတော့ အဲဒီလို ဘာမှမရှိတော့တဲ့ဖိုင်ကို ပြန်ကယ်လို့ မရတော့ဘူးလား မေးချင်နေသလား။ မပြောဘူး . . . ။ သိချင် ၀ယ်ဖတ်။ ဟဲ . . . ဟဲ . . . ။
ကဲ . . . Erase သုံးပြီး Select လုပ်လိုက်၊ ဖျက်ကြည့်လိုက်။ ပြီးရင် “U” ရိုက်ပြီး Undo လုပ်လိုက်နဲ့ စမ်းကြည့်ပါ ခင်ဗျား။ နောက်မှ “U” နဲ့ “UNDO” နဲ့ကွာတာကို နောက်စာတပုဒ်မှာ ရှင်းပြပါ့မယ်။
Command Line: CO (or) CP (or) COPY <Enter>
2D-09: Fig-04 - Menu Bar: Modify> Copy
2D-09: Fig-05 - Toolbar: Modify Toolbar > Copy button
2D-09: Fig-06 - Ribbon: Home Tab> Modify Panel > Copy
ဒီတခါတော့ ကျနော်နဲ့အတူတူ လိုက်လုပ်လို့ရအောင် “COPY 2004.DWG” ဆိုတဲ့ File ကို Download ချပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် ကျနော်အောက်မှာ ဖော်ပြထားသလို တွေ့နေပြီနော်။
2D-09: Fig-07 – COPY 2004.DWG File
ကျနော် အရင်ဆုံး Rectangle ရဲ့ ဘယ်ဘက်အပေါ်ထောင့်က ပဉ္စဂံ (Pentagon) ကို Circle ရဲ့ Centre နဲ့ အပေါ် Quadrant မှာ Copy ကူးချင်ပါတယ်။
Select objects: 1 found - ပဉ္စဂံ (Pentagon) ကို ရွေးလိုက်တာပါ။
Select objects: <Enter> - နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာ မလိုတော့လို့ Enter ခေါက်တာပါ။
လို့ မြင်နေရတာက Default က Multiple Mode ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်တိုက် Copy တွေကူးသွားလို့ ရပါတယ်။ အခု Base point အနေနဲ့ Rectangle ရဲ့ Upper Left Corner ကို Object Snap END နဲ့ ရွေးပါ့မယ်။ Object Snaps တွေကို ဘယ်လို အသုံးပြုနိုင်တယ်ဆိုတာ “2D-05: Object Snaps ရဲ့ အသုံးဝင်ပုံများ” မှာ ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: Circle ရဲ့ Centre ကိုဖမ်းပါ့မယ်။
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: Circle ရဲ့အပေါ် Quadrant ကိုဖမ်းပါ့မယ်။
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: <Enter>
နောက်ထပ် Copy မကူးချင်တော့လို့ Enter ခေါက်ပြီး ထွက်လိုက်တာပါ။
အခုပြီးသွားတဲ့ လေ့လာမှုမှာ Base point ကို Select object ဧရိယာထဲမှာ ယူထားပါတယ်။
နောက်ထပ် ကြည့်ရအောင် . . .
ဒီတခါ Rectangle ရဲ့ Upper Left Corner ကနေ Upper Right Corner ကို Copy ကူးမယ်။ Base point ကိုလဲ Select object ရဲ့အပြင်ဘက် Rectangle ရဲ့ Lower Left Corner ကိုယူပါ့မယ်။
2D-09: Fig-09 (a)
2D-09: Fig-09 (b)
Select objects: 1 found - Rectangle ရဲ့ Upper Left Corner မှာရှိတဲ့ ပဉ္စဂံ (Pentagon) ကိုရွေးပါတယ်။
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: Rectangle ရဲ့ Lower Left Corner က End ကိုဖမ်းပါ။
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: Rectangle ရဲ့ Lower Right Corner က End ကိုဖမ်းပါ။
အခုဆိုရင် Base point ကနေ Second point ကို Relative ယူသွားတာ သဘောပေါက်မှာပါ။ Second point မပေးခင် Mouse pointer ကိုရွေ့ကြည့်ရင်း Rubber Band လို့ခေါ်တဲ့ အမျှင်တန်းလေးမြင်တာနဲ့ သဘောပေါက်မှာပါ။
ဒါကို နားလည်သွားရင် အပေါ်အ၀ါရောင်လိုင်းပေါ်က objects ၃ခုကို ရွေးပြီး Copy တွေ ဆက်တိုက် ကူးကြည့်လိုက်ရအောင် . . . ။
2D-09: Fig-10 (a)
2D-09: Fig-10 (b)
Hexagon, Circle, Triangle – objects ၃ခုစလုံးပါအောင် လည်သလို ရွေးပေတော့ . . . ။
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: အ၀ါရောင်ရဲ့ ဘယ်ဘက် အောက်က End ကို Base Point ထား။
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: အဖြူရောင်လိုင်းရဲ့ အောက်ဘက် End ကို Second point ထားပါ။ ဆိုလိုတာက ကျနော်တို့ လိုချင်တဲ့အကွာအဝေးဟာ အ၀ါရောင်လိုင်း ဘယ်ဘက်အောက် End နဲ့ အဖြူရောင်လိုင်း အောက်ဘက် End ကြားအကွာအဝေး ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးရင် Copy ကူးပြီးသား Objects တွေရဲ့ Center တွေကို Second point တွေအဖြစ်ဆက်ဆက်ပေးပြီး ကူးကြည့်လိုက်ပါ . . . ။
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>:
ကဲ . . . နောက်ဆုံးတော့ အောက်ဆုံးက ပုံလိုမြင်ရပြီပေါ့ . . . ။
2D-09: Fig-10 (c)
ဒီတခါ တမျိုး Copy ကူးကြည့်မယ်။ ခုနက Copy တွေဆက်တိုက်ကူးလိုက်တဲ့ အ၀ါရောင်လိုင်းရဲ့ ညာဘက်အပေါ်နားက Hexagon, Circle & Triangle ကို Displacement နဲ့ ကူးပါ့မယ်။
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: 5,0 <Enter>
တကယ်တော့ <……> ထဲက Default Value ပါ။ အခု ကျနော်တို့ ပေးလိုက်တဲ့ 5,0 ကို AutoCAD က Base point လို့ထင်ပြီး Absolute Coordinate (5,0) ကို သွားဖမ်းထားတာ Mouse pointer ကို လှုပ်ကြည့်ရင် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: <Enter>
ဒီနေရာမှာ ဘာမှမပေးတော့ပဲ Enter ခေါက်လိုက်တော့မှ AutoCAD က ကျနော်တို့ ပေးခဲ့တာဟာ Base point မဟုတ်ဘူး။ Displacement လို့နားလည်ပြီး စောစောက ရွေးထားတဲ့ Object(s) တွေကို 5,0 အတိုင်း Copy ကူးပေးလိုက်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး Copy ကူးထားတဲ့3Objects ကိုတခါ အခုလို ထပ်ကူးကြည့်ရအောင် . . .
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: 10<45 <Enter>
ဒါဆိုရင် အပေါ်ပုံမှာ ပြထားသလို ရပြီပေါ့။
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာလေး တခုရှိသေးတယ်ဗျာ . . . ။
Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: တနေရာရာကို Click လွယ်လွယ်ပေးလိုက်ဗျာ။
Specify second point or [Array] <use first point as displacement>: @5,0 <Enter>
ခုနက ပေးတဲ့ Base point ကနေ @5,0 ကွာမယ်လို့ ပြောလိုက်တာပါ။
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: @10,0 <Enter>
ဒီမှာ ပြောချင်တာက ကျနော်တို့က Copy Command ထဲက မထွက်သေးတော့ Last point ဟာ ပထမပေးထားတဲ့ Click point ပဲ မှတ်ထားတယ်ဆိုတာ သိစေချင်လို့ပါ။ ဒါကြောင့် တခုနဲ့တခု5Units စီကွာဝေးချင်ပေမယ့် ဒုတိယမြောက် Copy ဟာ ပထမဆုံး Base point ကနေဆိုရင် 10 Units ကွာတာ သတိချပ်စေချင်လို့ပါ။
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: @15,0 <Enter>
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: @20,0 <Enter>
Specify second point or [Array/Exit/Undo] <Exit>: @25,0 <Enter>
စသဖြင့် ကူးမှ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။
ကဲ . . . ဒီလောက်ဆို လည်လည်ပတ်ပတ် ကူးတတ်ရောပေါ့ . . . ။
Command Line: M (or) MOVE <Enter>
2D-09: Fig-13 - Menu Bar: Modify> Move
2D-09: Fig-14 - Toolbar: Modify Toolbar > Move button
2D-09: Fig-15 - Ribbon: Home Tab> Modify Panel > Move
Command: MOVE <Enter>
ဟင် ဘာမှလဲ မပြောဘူး၊ မရှင်းဘူးလို့ အပြစ်တင်ချင်သလား။ ကျနော်အပေါ်မှာ ပြထားတဲ့ Command prompt က စာတွေကို ကြည့်ပါအုန်း။ Copy နဲ့ အားလုံးအတူတူပါပဲ။ Idea လည်းလုံးဝ အတူတူပဲ။ ဘာပဲကွာသလဲဆိုတော့ . . .
Copy ဆိုရင် မူရင်းလဲကျန်ခဲ့မယ်။ မိတ္တူအသစ်လဲရမယ်။
Move က မူရင်းမကျန်ခဲ့ဘူး။ နေရာသစ်ကို ရွေ့သွားလို့လေ။ ကဲ . . . ရှင်းတယ်နော်။
Posted by Wise Guy at 7:06 AM0comments Links to this post
2D-08: Basic Drawing Commands (Arc, Ellipse, Donut)
ဒီတခါတော့ ကျန်နေသေးတဲ Basic Drawing Commands လေးတွေ နည်းနည်းဆက်ပြောပါ့မယ်။ တကယ်က ပုံတွေဆွဲနိုင်ဖို့ အခြေခံကျတဲ့ Basic Drawing Commands တွေ တဆက်တည်း ပြောချင်ပေမယ့် အခြေအနေအရ၊ ကျနော့်ရဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုအရ တခါတည်း မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။
အခြေခံတွေဆွဲနိုင်ပြီဆိုရင် Modify Commands တွေဆက်ပြီး လေ့လာသွားကြမယ်။ ဒါမှ စာဖတ်သူတွေ Professional level ကို ရောက်နိုင်တော့မှာပါ။ ကျနော့်ဆောင်းပါးတွေကို လေ့လာလို့လွယ်ကူအောင် စီစဉ်ထားပါတယ်။ ကျနော်နဲ့အတူတူ လိုက်လုပ်၊ လိုက်ဆွဲရင် ရသွားမှာပါ။ တခုပဲ ရှိတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ စိတ်ရှည်ဖို့ပါ။ ကျနော့်စာတွေ စောင့်ဖတ်ဖို့က တော်တော်လေး စိတ်ရှည်ရမယ်။ ခွင့်လွှတ်ပါဗျာ။ ကျနော်လည်း တထိုင်တည်း Posts တွေ ဆက်တိုက်တင်ချင်တာပေါ့။ ဒါပေမယ့် မန်းမန်းစားဖို့ အလုပ်ကလည်း လုပ်နေရတယ်။ ပြီးတော့ နည်းပညာဆောင်းပါးဆိုတော့ တော်တော်လေး တာဝန်ကြီးပါတယ်။ အမှားမရှိလို့ ချီးကျူးမခံရပေမယ့် နည်းနည်းလေးမှားရင် ၀ိုင်း“ပေး”ကြမှာ အသေအချာပါပဲ။ ဒါတွေကို တာဝန်မယူရဲလို့ မဟုတ်ပေမယ့် အမှားမပါစေချင်တာ၊ “အလို” မရှိစေချင်တာ ကျနော့်စေတနာပါ။
စာရေးနေတုန်း တဖက်က AutoCAD ထဲမှာ ကျနော်ကိုယ်တိုင်လည်း လိုက်ဆွဲကြည့်နေရတယ်။ ကျနော်ပြောတာ၊ ရေးတာ၊ ရှင်းပြတာ ဟုတ်သလား၊ မဟုတ်သလား ဆိုတာကိုလေ။ ဘာနားလည်ရခက်မလဲ၊ ဘာအဆင်မပြေဖြစ်နိုင်သလဲပါ တလက်စတည်း စဉ်းစားရင်းပေါ့။ လိုအပ်တဲ့ ပုံတွေ Capture ဖမ်းရတယ်။ ပြီးတော့ Photoshop ထဲမှာလိုသလို ပြင်ဆင်ရတယ်။ နဂိုကတည်းက စာရိုက်တာ လက်အနေအထား အမှန်မရိုက်တတ်ရတဲ့အထဲ Word မှာ မြန်မာလို ရိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ Windows Live Writer ထဲထည့်။ ပြီးမှ Blog ထဲကို Publish လုပ်ရတယ်။ ပြီးရင် Blog ထဲမှာ လိုသလို Edit လုပ်နဲ့ တော်တော် အချိန်ပေးရတဲ့အတွက် ကျနော့်ရဲ့ အားထုတ်မှုကို ကြိုးစားနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား . . . ။
ကဲ အလွမ်းသည်တာ နည်းနည်းများရှည်နေမလားလို့။ နည်းပညာဘက် ပြန်သွားလိုက်ရအောင် . . . ။
အခြေအနေအရ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ Arc တွေဆွဲနိုင်ဖို့ လေ့လာကြရအောင် . . . ။
သချာင်္သဘောအရ မျဉ်းတဖြောင့်တည်းမကျတဲ့ အမှတ် သုံးခုရှိရင် Arc တခုဆွဲနိုင်ပါတယ်။ AutoCAD ကဒါတွေတင်မက Options သုံးခုရှိရင် Arc တခုဆွဲနိုင်ဖို့ ဖန်တီးပေးထားပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ . . .
ဒီနေရာမှာ3Points ကမျဉ်းတဖြောင့်တည်း မကျရဘူးနော်။ Angle ဆိုတာက Included Angle (ဗဟိုခံဆောင်ထောင့်) ကို၊ Length ဆိုတာ Chord Length (လေးကြိုးမျဉ်းရဲ့အလျား) ကိုဆိုလိုတာပါ။ Direction ကတော့ Start Point မှာဆွဲတဲ့ Tangent ရဲ့ Direction ကို ပြောချင်တာပါ။ ရှေ့မှာ Arc Command သုံးပြီး Arc(s) ဆွဲထားပြီးရင် Continue နဲ့ Arc(s) တွေ လိုသလို ဆက်ဆွဲနိုင် ပါသေးတယ်။
Options - ၃ခုဆိုပေမယ့် အပေါ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ အတွဲအတိုင်းပဲ ရမှာနော်။ ခင်ဗျား စိတ်ထင်သလိုတွေ စွတ်တွဲပြီး ဆွဲတာတော့ AutoCAD ကဘယ်နားလည်ရှာနိုင်မလဲလေ။ Menu, Toolbar, Ribbon သုံးတဲ့သူတွေက သတိထားစရာ မလိုပေမယ့် Command Line သုံးသူတွေ အဆင်ပြေနိုင်ဖို့ ကျနော် Options အတွဲလေးတွေ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အတွဲမတတ်ရင် သိတယ်ဟုတ် . . . ။
2D-08: Fig-01 - Arc Options
2D-08: Fig-02 - Terminology of Arc
2D-08: Fig-03 - Arc Options
Arc ဆွဲတဲ့အခါ Direction က Counter clockwise ဆိုတာလည်း သိထားသင့်ပါတယ်။ ကျနော်နောက်ပိုင်း Exercises တွေမှာကျရင် အလိုရှိသလို အသုံးချပုံတွေ တင်ပြသွားပါ့မယ်။ အခုတော့ Arc တွေကို ကျနော် အပေါ်မှာပြထားတဲ့ Options တွေလေ့လာပြီး စမ်းဆွဲကြည့်ထားပါ ခင်ဗျား . . . ။
Command Line: ARC (or) A <Enter>
2D-08: Fig-04 - Menu Bar: Draw> Arc > Choose Option
2D-08: Fig-05 - Toolbar: Draw Toolbar > Arc button
2D-08: Fig-06 - Ribbon: Home Tab> Draw Panel > Arc
ပထမဆုံး Default အတိုင်းလိုက်လုပ်ကြည့်ရအောင်။
Command: ELLIPSE <Enter>
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: တနေရာရာမှာ Click တချက်ပေးလိုက်ပါ။
Specify other endpoint of axis: နောက်တနေရာမှာ Click တချက် ထပ်ပေးလိုက်ပါဦး။
Specify distance to other axis or [Rotation]: စောစောကပေးထားတဲ့2Points ကြောင့် Axis တခုနဲ့ Ellipse Centre ကိုသိနေပြီ။ ဒီတခါတော့ သိပြီးသား Axis ကနေကွာဝေးမဲ့ အကွာအဝေးတခုကို ပေးရုံပါပဲ။
နောက်တမျိုး စမ်းကြည့်ရအောင် . . .
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: c <Enter>
Specify center of ellipse: တနေရာကို Ellipse Centre အဖြစ် Click ပေးလိုက်ပါ။
Specify endpoint of axis: Axis တခုအတွက် End point အဖြစ် Click ပေးလိုက်ပါ။
Specify distance to other axis or [Rotation]: နောက် Axis အတွက် အကွာအဝေး တခုအဖြစ် Click တချက်ပေးလိုက်ပါ။
Options နှစ်ခုဟာ နားလည်ဖို့ သ်ိပ်မခက်တာကို သတိထားမိမှာပါ။ အခုတော့ Command ရယ်၊ Options တွေရယ် သိရုံလောက် အကြမ်းဆွဲကြည့်နေတာပါ။ အတိအကျ လိုချင်ရင်တော့ ရိုက်ထည့်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါကိုလဲ နောင် Exercises တွေမှာ ကျနော်ကြုံသလို ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ အပေါ်က နှစ်ခုစလုံးမှာ နောက်ဆုံးလိုင်းရဲ့ Option – [Rotation] ဆိုတာတွေ့မှာပါ။ ဒီ Option ကိုဆက်ဝင်ရင် -
Specify distance to other axis or [Rotation]: r <Enter>
Specify rotation around major axis: မှာ Angle တခုပေးရပါလိမ့်မယ်။ ဆိုလိုတာက ကျနော်တို့ ကြည့်နေတဲ့ Viewing Plain တနည်း Monitor မျက်နှာပြင်အတိုင်း ရှိနေတဲ့ Circle တခုကို လှည့်ကြည့်တာပါ။ ဆိုတော့ Ellipse ပုံဖြစ်တော့မယ်။ ပြီးတော့ ဆွဲပြီးသား Axis ထက်လည်း ဘယ်လိုမှ မကြီးနိုင်တော့လို့ AutoCAD က“အပိုင်” ရှိပြီးသား Axis ကို Major Axis လို့ပြောလိုက်တာ တွေ့မှာပါ။
90 Degree တော့ မဖြစ်နိုင်တာ မလုပ်ပါနဲ့နော်။ 90 Degree လှည့်လိုက်ရင် မျဉ်းကြောင်းတကြောင်းပဲ တွေ့ရမှာဆိုတော့ Ellipse လို့ ခေါ်လို့မရတော့ဘူးလေ။ ကျနော်အောက်ကပုံမှာ 30 Degree လှည့်ပြထားတာပါ။ စာဖတ်သူက View Point ကကြည့်ရင် Ellipse တခုလိုမြင်ရမှာပါ။ ဒါဟာ Ellipse ပဲနော်။ 3D လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။
2D-08: Fig-09 – Ellipse Command, Rotation Option
ရှေ့မှာ Arc အကြောင်းသိထားပြီးမှတော့ Elliptical Arc ဆိုတာ မခက်တော့ပါဘူး။
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:a<Enter>
ဒီအထိက အရင်အတိုင်းပါပဲ။ ဘာမှ မထူးခြားသေးဘူး။ ပြီးတော့မှ Elliptical Arc တခုအတွက် ကန့်သတ်ချက်တွေ ထပ်ပေးရမှာပါ။
Centre ကပေးပြီးသားဆိုတော့ Start Angle နဲ့ End Angle ပေးရင် အလိုရှိသလို Elliptical Arc တခုဖြတ်ပေးမှာပါ။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် Elliptical Arc ရဲ့အနားအလျား (Parameter) ကို ပေးလည်း ရတယ်။ Included Angle ပေးလဲရပါတယ်။ ဒီမှာလည်း Counter Clockwise Direction ပဲနော်။ ဥာဏ်ရှိသလို သုံးပါလေလို့ပဲ ပြောပါရစေတော့ . . . ။
Command Line: ELLIPSE (or) EL <Enter>
2D-08: Fig-10 - Menu Bar: Draw> Ellipse > Choose Option
2D-08: Fig-11 - Toolbar: Draw Toolbar > Ellipse button
Elliptical Arc ကဘေးမှာတင်နော် . . . ။
2D-08: Fig-12 - Ribbon: Home Tab> Draw Panel > Ellipse
Command အကြောင်းပြောမလို့နော်။ ပါးစပ်ကြီး ဟမလာနဲ့ဦး။ စားစရာ မဟုတ်ဘူး။ ဆွဲစရာနော် . . . ။
Command: DONUT <Enter>
Specify inside diameter of donut <0.5000>: Default အတိုင်းပဲ ယူဖို့ Enter ခေါက်လိုက်ပါ။
Specify outside diameter of donut <1.0000>: Enter ပဲခေါက်ပြီး လက်ခံလိုက်ပါ။
Specify center of donut or <exit>: Centre အတွက် ကြိုက်ရာတနေရာမှာ Click ပေးပြီး နေရာချလိုက်ပါ။
အလိုရှိသလောက် နေရာချပြီး မလိုတော့ရင် Enter or ESC သုံးပြီးထွက်လိုက်ပါ။
Inside & Outside Diameters တွေကို ကြိုက်သလို ပေးနိုင်ပါတယ်။ Inside Diameter = Zero ဆိုရင် Solid Circle တခုရမှာပါ။ တခါတလေမှာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ လိုအပ်ချက်အရ Solid Circle တခုကို Donut ဒါမှမဟုတ် Circle ကို Solid Hatch Fill ပေးပြီးသုံးပါခင်ဗျား။ Circle ကို Hatch Scale စိပ်စိပ်ပေးတာဟာ မလိုလားအပ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
Command: DONUT (or) DOUGHNUT (or) DO <Enter>
2D-08: Fig-13 - Menu Bar: Draw> Donut
2D-08: Fig-14 - Ribbon: Home Tab> Draw Panel> Donut
Toolbar ပေါ်မှာ မရှိပါခင်ဗျား . . . ။
ကဲ . . . ဒီလောက်ဆို ARC, ELLIPSE, DONUT တွေ လေ့လာလို့ ရလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်။ ကျန်နေသေးတဲ့ Drawing Commands တွေကို အဆင်ပြေသလို ပြောရင်းနဲ့ Modify Commands တွေဘက်ပါ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်သွားကြရအောင်နော် . . . ။
Posted by Wise Guy at 11:41 PM0comments Links to this post
2D-07: AutoCAD ရဲ့ Display ကို အလိုရှိသလို အသုံးပြုပုံ (Zoom & Pan)
AutoCAD ကိုအသုံးပြုပြီး ပုံတွေကို ဆွဲတဲ့အခါ ကိုယ်အလိုရှိသလို Display ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ လိုအပ်လှပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးလေးမှာ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာ ကျနော်ရှင်းပြပါ့မယ်။
ကျနော်နဲ့အတူတူ ဆက်လေ့လာနိုင်ဖို့ DisplayControl2004.DWG ဆိုတဲ့ File ကို Download ချပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။
Command: ZOOM <Enter>
[All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window/Object] <real time>: ဆိုတဲ့ Options တွေကို လေ့လာကြည့်ရအောင် . . .
All - ကျနော်တို့ရဲ့ Drawing တပုံလုံးကို ပြတဲ့အပြင် Limits Setting အကုန်ကိုလည်း ပြနေမှာပါ။ သိသာအောင် F7 နှိပ်ပြီး Grid ON လိုက်ရင် ပိုသိသာပါတယ်။
2D-07: Fig-01 – Zoom, All
Extents - ကတော့ Objects တွေကိုပဲ အဓိကထားပြပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ Upper Limit (12,9) ကိုမမြင်ရတာ သတိထားမိမှာပါ။ အပေါ်ပုံက Zoom, All ဖြစ်ပြီး အောက်ပုံကတော့ Zoom, Extents ဖြစ်ပါတယ်။
2D-07: Fig-02 – Zoom, Extents
Center – ကိုယူရင် Specify center point: “စ”တောင်းပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ ကြည့်လိုတဲ့ ဧရိယာရဲ့ Centre ကို Click ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Enter magnification or height <0.0000>: ဆိုတာ စောစောက ပေးလိုက်တဲ့ Centre Point ရဲ့ Vertical အတိုင်း အပေါ် တ၀က်၊ အောက်တ၀က် ကြည့်လိုတဲ့ အကွာအဝေးကို ပေးရမှာပါ။ အောက်ကပုံမှာ ကျနော်က Circle ရဲ့ Centre ကို Centre ပေးပြီး Height ကို3ပေးထားတာပါ။
2D-07: Fig-03 – Zoom, Center
Dynamic – ကို“စ”၀င်လိုက်တာနဲ့ အောက်မှာပြထားသလို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ အစိမ်းရောင် ဘောင်ခတ်ပြထားတာက လက်ရှိမြင်နေရတဲ့ ဧရိယာဖြစ်ပြီး အပြာရောင်ဘောင်ခတ်ပြထားတာက Zoom, All ယူရင် မြင်ရမယ့် ဧရိယာပါ။ အလယ်က ကြက်ခြေခတ်လေးက Zoom Centre ပါ။
Mouse ကို Click တချက်ပေးလိုက်တာနဲ့ Mouse Pointer ဟာ မြှားလေးပုံ ပြောင်းသွားပြီး ကြည့်လို့တဲ့ ဧရိယာ အကျဉ်းအကျယ်ကို Mouse ရွေ့ပြီး ရွေးနိုင်ပါတယ်။
အလိုရှိသလိုရရင် Clcik ထပ်ပေးလိုက်ပါ။ တခါပြန်ပြီး ကြည့်လိုတဲ့ ဧရိယာရဲ့ Centre ကိုပြန်ရွေးခွင့်ပေးပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကြည့်လိုတဲ့ ဧရိယာအကျဉ်းအကျယ်၊ Centre ကို စိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးရင် Enter ပဲခေါက်ခေါက်၊ Right Click, Enter ပဲဝင်ဝင် ရပါပြီ။
Previous - စောစောက ကြည့်ပြီးသား Zoom Setting ကိုပြန်ရွေးတာပါ။
Wndow - ကြည့်လိုတဲ့ ဧရိယာကို ဘောင်ခတ်ပြီး ကြည့်တာပါ။
Object - ကိုယ်ကြည့်လိုတဲ့ Object(s) တွေကို ရွေးပြီး Zoom ကြည့်တာပါ။
<real time> - က Default Setting ပါ။ Scale, nX, nXP နဲ့အတူတူပါပဲ။
0.25 က 25%၊ 0.5 က 50%၊ 1 က 100%၊2က 200%၊ . . . စသဖြင့် Scale ကို လိုသလိုချုံ့၊ ချဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အနောက်မှာ “x” ထဲ့ရိုက်ရင်တော့ လက်ရှိမြင်ကွင်းရဲ့ အဆ ဖြစ်ပါတယ်။
Zoom <Enter>2<Enter> ကိုအကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ရင် ပထမဆုံးတကြိမ်ပဲ ပြောင်းပြီး မပြောင်းတော့ပေမယ့်
Zoom <Enter> 2x <Enter> ကိုအကြိမ်ကြိမ်ရိုက်ရင် ပြောင်းပြောင်းသွားတာ သတိထားမိရင် ကွာခြားချက်ကို နားလည်မှာပါ။
nXP - ကတော့ Paper Space ရဲ့ အဆဖြစ်ပါတယ်။
Direct use of mouse
နောက်ပိုင်း Versions တွေမှာလွယ်လွယ် သုံးလို့ရလာပါတယ်။ Wheel ပါတဲ့ Mouse ဆိုရင် Wheel ကိုလှိမ့်ပြီး Zoom In, Zoom Out လုပ်လို့ရပါတယ်။
Wheel ကို Double Click နှိပ်ရင် Zoom, Extents ပါခင်ဗျား။
ဒီကနေ့ခေတ်မှာ Wheel မပါတဲ့ Mouse ကိုင်ရရင် လက်ကျိုးနေသလိုလို၊ တခုခုနဲ့ပဲ တုပ်နှောင်ခံထားရသလို ဖြစ်တဲ့အထိ အသုံးဝင် နေပါတယ်လေ။
ကျနော်က Command Line အဓိကထားပြောပေမယ့် စာဖတ်သူက Menu, Toolbar, Ribbon သန်သလို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် . . . ။
2D-07: Fig-08 - Zoom Menu
2D-07: Fig-09 - Zoom Toolbar
2D-07: Fig-10 - Zoom Ribbon
ကျနော်တို့က ပုံဆွဲနေရင်း Zoom ကိုတော့မပြောင်းလိုဘူး။ ဒါပေမယ့် စာရွက်တရွက်ကို ထက်အောက်ဘယ်ညာ ဆွဲကြည့်ချင်သလိုမျိုးဆိုရင် PAN Command ကိုသုံးပါတယ်။
Command: PAN <Enter>
လို့ Command Prompt မှာ တွေ့နေရမှာပါ။ Mouse Pointer ကတော့ Grabber Hand လို့ခေါ်တဲ့ လက်ဝါးပုံလေး ပြောင်းသွားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အလိုရှိသလို ဆွဲရွေ့ပြီးရင် Enter ပဲခေါက်ခေါက်၊ ESC ပဲနှိပ်နှိပ်၊ Right Click နှိပ်ပြီး Short-cut menu ပေါ်က Enter ပဲသုံးသုံး Pan Mode ထဲက ထွက်နိုင်ပါတယ်။
Wheel ပါတဲ့ Mouse နဲ့ Wheel ကိုဖိပြီး ဆွဲရွေ့ရင်လဲ Pan ပါပဲခင်ဗျား။ Wheel ကိုလွှတ်လိုက်တာနဲ့ Pan mode ထဲက ထွက်ပါပြီ။
Standard Toolbar ပေါ်မှာ Pan button ရှိပါတယ်။ လက်ဝါးပုံလေးပါ။
2D-07: Fig-11 – Pan Toolbar
Menu ကတော့ အသေးတောင် စိတ်လွန်းပါတယ်။
2D-07: Fig-12 – Pan Menu
Ribbon ပေါ်ကလည်း သုံးလို့ရပါတယ်။
2D-07: Fig-13 – Pan Ribbon
ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင် အလိုရှိသလို Display ကိုအသုံးပြုနိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။
Posted by Wise Guy at 5:59 AM0comments Links to this post
2D-06: သိထားသင့်သော Selection Methods များ
ကျနော်တို့က ပုံတွေဆွဲတဲ့အခါ မလွဲမသွေ Modify လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာမှာပါ။ ဘာကိုပဲ Modify လုပ်ချင်ချင်၊ ဘယ်လိုပဲလုပ်ချင်ချင် အရင်ဆုံး Selection လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်အလိုရှိတာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် ကျနော် အခု Selection Methods တွေအကြောင်းရှင်းပြပါ့မယ်။
ပထမဆုံး Selection Methods တွေ ဘာတွေရှိသလဲ သိနိုင်ဖို့ “စ”လေ့လာရအောင် . . . ။
Command: SELECT <Enter>
Select objects: ? <Enter>
အောက်က Command Area က Default အတိုင်းဆို သုံးကြောင်းတည်းဆိုတော့ မမြင်ရရင် F2 နှိပ်ပြီး Text Screen ဘက်သွား လေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့အတူတူ လေ့လာရအောင် Selection 2004.DWG ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကို Dowload ချပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေနိုင်အောင် ကျနော် Version 2004 ထိချပြီး သိမ်းပေးထားပါတယ်။
အခုဆိုရင် အောက်မှာဖော်ပြထားသလို တွေ့နေရပြီနော် . . . ။
အခုမြင်နေရတဲ့ Drawing ထဲက Object(s) တွေကို Mouse Pointer လေး လိုက်တင်ကြည့်ပါ။ ဒီအခါမှာ Temporary Highlight နဲ့ ပြတာ တွေ့ရမှာပါ။ ဟိုး Versions အနိမ့်တွေတုန်းကတော့ အဲဒီလိုမမြင်ရပါဘူး။
ကြုံလို့ တလက်စတည်း ပြောရရင် . . .
ဘယ်ဘက်အောက်က အဖြူရောင် (အဖြူရောင်အောက်ခံဆို အမည်းပေါ့လေ) Lines ၂ခုက သီးခြား Object တခုချင်းအနေနဲ့တွေ့ရမှာပါ။ ဒါက LINE Command ကိုကျနော်သုံးပြီးဆွဲထားတာပါ။
အနီရောင် Rectangle ကတော့ အနားလေးဘက်စလုံး One Object တခုတည်းဖြစ်နေတာက RECTANGLE Command ကိုသုံးထားလို့ပါ။
အပြာရောင် ပဉ္စဂံလေးကလည်း POLYGON Command နဲ့ဆွဲထားလို့ တခုတည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ခရမ်းရောင်ကတော့ PLINE Command နဲ့ဆွဲထားတဲ့ Polyline တခုဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်ဘက်အပေါ်က အပြာရောင်ကြပ်ခြေခတ်လိုင်းနှစ်ခုကြားမှာ ပဉ္စဂံ၊ ထောင့်မှန်စတုဂံ၊ စက်ဝိုင်းတွေနဲ့ အားလုံးကို Object တခုတည်း တွေ့နေရတာက Block တခုဖြစ်လို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကအကြမ်းဖျင်း Objects တွေအကြောင်း ရှင်းပြတာပါ။
Modify လုပ်ဖို့အတွက်တော့ တကယ်ဖြစ်ဖြစ်မြောက်မြောက် ရွေးပေးရတော့မှာနော်။
အလွယ်ဆုံးကတော့ Object တခုချင်း အလိုက် Click ပေးပြီး (Pick လုပ်ပြီး) ရွေးတာပါ။
ကျနော်တို့က ဘာ Command မှ မသုံးတဲ့အခါမှာ မြင်နေရတဲ့ Mouse Pointer လေးမှာ ကြက်ခြေခတ်လေးကို Cross-hair လို့ခေါ်ပြီး Square လေးကိုတော့ Aperture Box လို့ခေါ်ပါတယ်။
ဆိုရင် Mouse Pointer မှာ Square တခုပဲတွေ့နေရတာကိုတော့ Pickbox လို့ခေါ်ပါတယ်။ (Terms တွေမသိပဲ ပြောဆိုဆွေးနွေးရင် အ“အ” အိမ်မက်မက်တာ ပြန်ပြောသလို ဖြစ်နေမှာ စိုးလို့ပါဗျာ။)
Select objects: မှာ ညာဘက်အလယ်က Line ရယ်၊ Rectangle, Circle တွေကို Pick လိုက်ပါ။
အခုဆိုရင် ကျနော် Click ပေးပြီး LINE, RECTANGLE, CIRCLE ကိုရွေးလိုက်တဲ့အတွက် Highlight နဲ့ပြတာတွေ့ရမယ်။ အပေါ်ပုံမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ပြီးတော့ Modify လုပ်နိုင်ဖို့ Grips အစက်လေးတွေလည်း တွေ့နေရမှာပါ။ Grips တွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ ဆိုတာတော့ နောက်မှဆွေးနွေးပါ့မယ်။ ဒါအလွယ်ဆုံး ရွေးလိုက်တာပါ။ ဒီ Selection ကို Cancel လုပ်ဖို့ကတော့ ESC (Escape) Key ပါပဲ။
ကျနော်အောက်မှာ ရှင်းပြထားတဲ့ Options တွေကို လေ့လာပြီး SELECT Command သုံး၊ Options တွေဖြစ်တဲ့ Window/Last/Crossing/BOX/ALL/Fence/WPolygon/CPolygon/Group/Add/Remove/Multiple/Previous/Undo/AUto/SIngle/SUbobject/Object ကိုဆက်ဝင်ပါ။
Option(s) ကိုဆက်ဝင်ရင် Capital Letter နဲ့ပြထားတဲ့ စာလုံးတွေပဲ ရိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ ၀ိဝါဒမကွဲရအောင် Add ကို “A” ပဲရိုက်ရပြီး All ကျတော့ “ALL” ရိုက်ရတာ သတိထားမိမှာပါ။ မကွဲပြားရင်လဲ AutoCAD ကပြန်မေးပါလိမ့်မယ်။ စိတ်မပူပါနဲ့လေ . . . ။ ရွေးကြည့်လိုက်၊ ESC နဲ့ပြန် Cancel လုပ်လိုက် စမ်းကြည့်ပါ။ ဘယ်လို Select လုပ်တယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်သွားမှာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ ဘယ် Modify Commands တွေပဲသုံးသုံး Select objects: လို့တွေ့ရတိုင်း ဒါတွေအားလုံး သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာ သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။
Window - ကိုယ်ရွေးလိုတဲ့ Object(s) တွေကို ထောင့်ဖြတ် Rectangle လေးတခု ဘောင်ခတ်ရွေးတာပါ။ ကျနော်တို့ ရွေးလိုတဲ့ Object(s) တွေဟာ Rectangle ထဲမှာ “လုံးဝ” ကျရောက်နေရမယ်။
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ Window Selection Box ဟာ Default အတိုင်းဆိုရင် အပြာရောင်သန်းပြီးတော့ ပတ်လည်အနားကိုကြည့်ရင် Continuous Line ဆိုတာ သတိထားမိမှာပါ။ အခုကျနော် ပြထားသလိုဆိုရင်3Lines ပဲ Box ထဲမှာ အကုန်ကျရောက်နေလို့3Objects ပဲရွေးပါလိမ့်မယ်။
Last – ကျနော်တို့ Drawing ထဲမှာ နောက်ဆုံးဖန်တီးခဲ့၊ ဆွဲခဲ့တဲ့၊ အခုလည်း မြင်နေရတဲ့ Object ကိုပြန်ရွေးတာပါ။ လက်ရှိ Space (Model or Paper) ထဲမှာလဲရှိရမယ်။ အဲဒီ Object ရှိနေတဲ့ Layer ဟာ Frozen, Off မလုပ်ထားဖို့လဲ လိုပါတယ်။
Crossing – Window နဲ့ သဘောချင်း ဆင်ပါတယ်။ မတူတာက ကျနော်တို့ ရွေးလိုတဲ့ Object(s) တွေဟာ Rectangle ထဲမှာ Window လို“လုံးဝ” ကျရောက်စရာမလိုပဲ တစိတ်တပိုင်း ကျရောက် နေလည်းရွေးပါတယ်။
အောက်မှာ ပြထားတဲ့ပုံကို လေ့လာကြည့်ပါ။ Crossing Selection Box ဟာ Default အတိုင်းဆိုရင် အစိမ်းရောင်သန်းပြီးတော့ ပတ်လည်အနားကိုကြည့်ရင် Hidden Line ဆိုတာ သတိထားမိမှာပါ။ အခုကျနော် ပြထားသလိုဆိုရင်3Lines ရယ်၊ Rectangle, Circle ရယ်က တပိုင်းတစ Box ထဲမှာ ကျရောက်နေလို့5Objects ရွေးပါလိမ့်မယ်။
BOX – ကတော့ Window နဲ့ Crossing ကိုရောသမမွှေထားတာပါ။ ထောင့်ဖြတ် ဘယ်ကနေညာကိုဆွဲရင် Window, ညာကနေဘယ်ကိုဆွဲရင် Crossing ပါပဲ။ (Direct use of mouse နဲ့ အတူတူပါပဲ။)
ALL – Model Space နဲ့ Current Layout Space ထဲမှာ ရှိသမျှ Object(s) တွေ အကုန်ရွေးမယ်။ ဒါပေမယ့် Frozen & Lock Layer ထဲက Object(s) တွေတော့ ပါမှာမဟုတ်ဘူးနော်။
Fence – ခြံစည်းရိုးလိုက်ခတ်ပြီး ရွေးတာပါ။ ကျနော်တို့ Fence Line နဲ့ ထိသမျှ Object(s) အကုန် ရွေးပါလိမ့်မယ်။
WPolygon – Window Polygon ပါ။ Window နဲ့သဘောချင်းတူပြီး ကျနော်တို့ ဘောင်ခတ်လိုက်တဲ့ Polgon ထဲ“လုံးဝ”ကျတဲ့ Object(s) တွေကို ရွေးပါ့မယ်။
CPolygon – Crosing Polygon ပါ။ Crossing နဲ့သဘောချင်းတူပြီး ကျနော်တို့ ဘောင်ခတ်လိုက်တဲ့ Polygon ထဲမှာ တခုလုံးကျရောက်တာတင်မက တစိတ်တပိုင်းကျတဲ့ Object(s) တွေပါ အပါရွေးလမ့်မယ်။
Group – စောစောကတည်းက Group(s) ဖွဲ့ထားပြီး အဲဒီ Group(s) နံမည်တွေနဲ့ ပြန်ရွေးတာပါ။ Group Selection ကိုပြရင် Rectangular Box လေးပါ ထည့်ပြတာ သတိထားမိမှာပါ။
Remove – ရွေးထားတဲ့ Selection Set ထဲက မလိုချင်တာကို ပြန်ဖယ်ထုတ်ဖို့ သုံးပါတယ်။
Add – Remove mode ထဲရောက်နေတဲ့အခါ Command Prompt မှာ Remove objects: လို့ပဲမြင်နေရမယ်။ Selction Set ထဲကို ထပ်ပေါင်းထည့်ချင်တဲ့အခါ Add နဲ့ ပြန်ဝင်မှ Select objects: လို့ပြန်မြင်ရပြီး ဆက်ရွေးနိုင်မှာပါ။ (Remove နဲ့ Add ကတွဲသုံးရမှာပါ။)
Multiple – ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ Object(s) တခုချင်းကို Highlight နဲ့မပြတော့ပဲ ပြီးမှအားလုံးကို Highlight နဲ့ပြပါလိမ့်မယ်။ ရှုပ်ရှုပ်ထွေးထွေး၊ အရောရောအထွေးထွေးတွေ ရွေးချယ်ဖို့အတွက် အသုံးဝင်ပါတယ်။ Highlight မမြင်ရတော့ ရွေးနေချိန်မှာ အနှောင့်အယှက် ကင်းပါတယ်။
Previous – “နောက်ဆုံး” ရွေးဖူးခဲ့တဲ့ Selection Set ကိုပြန်ရွေးတာပါ။
Undo – “နောက်ဆုံး” လုပ်ခဲ့တဲ့ Action ကို Undo လုပ်တာပါ။
SIngle – Select လုပ်ရင် နောက်ထပ် Select လုပ်ဖို့ Select objects: လို့ Command Prompt Area မှာ ဆက်ပြီး ရွေးချယ်ခွင့် ပေးနေတာ Default ပါ။ ဒါကို မလိုချင်လို့ ကျနော်တို့က တခုတည်းရွေးချယ်ပြီး Modify လုပ်ချင်တဲ့အခါ သုံးပါတယ်။
SUbobject – 3D Solid တခုကို ရွေးတဲ့အခါ ကျနော်တို့ အလိုရှိတာဟာ Solid တခုလုံးလား၊ Face, Edge, Vertex လား ခွဲခွဲခြားခြားထပ်ရွေးနိုင်ဖို့အတွက် သုံးပါတယ်။
Object – Subobjet Mode ထဲကနေပြန်ထွက်ပြီး တခြား Select လုပ်ချင်တာတွေ လုပ်နိုင်ဖို့၊ တခြား Options တွေကို သုံးနိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ (Remove နဲ့ Add လို SUbobject နဲ့ Object ကအတွဲမျိုးပါ။)
အခုနောက်ပိုင်း Versions တွေမှာ ရတာလေး ပြောချင်ပါသေးတယ်။ ဘယ် Version က“စ”ရသလဲတော့ ကျနော်လဲ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာ။ တစုံတခုကို Select လုပ်ချင်ရင် Mouse ကို ညာကဘယ်ကို ထောင့်ဖြတ်ဆွဲရင် Window Selection, ဘယ်ကညာကို ထောင့်ဖြတ်ဆွဲရင် Crossing Selection ပါခင်ဗျား။ Selection Set ထဲက Remove လုပ်ချင်ရင် Shift+Click နဲ့ လုပ်နိုင်ကြောင်းလဲ ပြောပါရစေ။ ဒီလောက်လွယ်တာကို ဘာလို့ အပေါ်မှာ ဒီလောက်ရှင်းနေရသလဲ ဆိုတော့ အသုံးဝင်လို့ပေါ့ဗျာ . . . ။
ကဲ . . . ဒီလောက်ဆို ခင်ဗျားတို့ မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်နိုင်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်။ AutoCAD မှာတင်မက ဘ၀တခုလုံးမှာပါ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုရင်း . . .
Posted by Wise Guy at 8:31 AM0comments Links to this post
S-04: Internet Download Manager 6.07 Installer with Crack
ကျနော့်ကို တချို့တွေက ပြောလာကြပါတယ်။ IE နဲ့ပဲ Download ချစရာ ရှိလို့ချတာ အဆင်မပြေဘူးတဲ့လေ . . . ။
မထူးတော့ပါဘူးဗျာ။ ပို့မယ့်ပို့တော့လည်း အဆုံးထိပို့ပေးတာပဲ ကောင်းတာမှို့ ကျနော် Internet Download Manager 6.07 ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၁-ရက်နေ့ကမှ ထွက်လာတဲ့ အသစ်စက်စက်လေးဆိုတော့ သဘောတွေ့ကြမယ် ထင်ပါတယ်။
Download ချရင် ကိုယ်ကြိုက်သလို စိတ်ပိုင်းပြီး တပြိုင်တည်းချပေးသလို (Default က ၈-ပိုင်း၊ အများဆုံး ၁၆ပိုင်း) အားလုံးပြီးရင်လဲ File ကိုပြန်ပေါင်းပေးပါတယ်။ မတော်လို့ Connection ပြတ်သွားလည်း ဘာမှပူစရာမရှိဘူး။ အဆင်ပြေတဲ့အချိန်မှာ ရောက်နေတဲ့နေရာကနေ ဆက်ပြီး Download ချဖို့ အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ထပ် အားသာချက်တွေကိုတော့ ကိုယ့်ဖာသာပဲ လေ့လာကြည့်ကြပါတော့ . . . ။
Download Link : Internet Download Manager 6.07
Posted by Wise Guy at 4:34 AM0comments Links to this post
2D-09: Basic Modifying Commands (Erase, Copy, Move...
2D-08: Basic Drawing Commands (Arc, Ellipse, Donut...
2D-07: AutoCAD ရဲ့ Display ကို အလိုရှိသလို အသုံးပြ...
S-04: Internet Download Manager 6.07 Installer wit...
T3D-02: ကြောင်လိမ်လှေခါး (3D Spiral Staircase) ဆွဲ...